Zvigadzirwa Fekitori | China Zvigadzirwa Vagadziri & Vatengesi
Rectangular chubhu pasuru Re ...
Fekitori zvakananga mutengo 30mm ...
Bhaira chiwanikwa nyere chiwanikwa chiwanikwa ste ...
High nemazvo chando wakavhomorwa S ...
Hot yakapetwa kabhoni musono ...
Seamless simbi mutopota (Seamless chubhu) chidimbu chakareba chesimbi chine mhango chikamu uye chisina seams chakakomberedza.
Yakakwira chaiyo kutonhora yakadhonzwa chaiyo simbi pombi isina musono simbi chubhu
Kunyorera: Inoshandiswa mukugadzira michina chimiro, hydraulic michina, auto zvikamu, simbi sleeve.
Fekitori zvakananga mutengo 30mm ss simbi simbi mutopota musono chubhu 100 × 100
Square simbi mutopota imhando yezita rekwere pombi, ndokuti, iyo simbi pombi ine yakafanana divi kureba.Iyo inogadzirwa nesimbi simbi mushure mekugadziriswa. Drawing square pipe: Kazhinji, ubvise simbi haina kuburitswa, yakati sandara, yakakombama, yakasungwa kuita yakatenderera pombi, uye ndokuzungurutswa kuita mativi pombi neiyo yakatenderera pombi uye ndokucheka muinodiwa urefu.
Rectangular chubhu pasuru rectangular simbi Tubing mutengo runyorwa
Chubhu rectangular chidimbu chakareba chine mhango yesimbi, inozivikanwa seyakapetwa chubhu, flat chubhu kana flat chubhu (sezita zvarinoreva). Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira michina zvikamu uye zvivakwa zveinjiniya nekuda kwehuremu hwayo huremu uye kupfugama kuramba.
Yakaputirwa simbi yekuvaka simbi kabhoni simbi simbi ndiro yemutengo
Alloy simbi yeplate pakakwirira tembiricha ine yakanyanya kupisa simba (b≥440MPa) uye oxidation kuramba, uye ine kumwe kurwisa kwehydrogen ngura.
Mutengo wefekitori Wholesale simbi isina simbi
Isimbi isina simbi ndiro pamusoro yakachena, ine yakakwira mapurasitiki, kuomarara uye simba rechimakanika, asidhi, alkaline gasi, mhinduro uye imwe midhiya ngura.Iyo mhando yesimbi yesimbi isingabvu nyore nyore, asi haina zvachose isina ngura.
Bimetallic laminated kusakara-kuramba simbi ndiro chigadzirwa cheplate chinonyanya kushandiswa kune yakakura-nzvimbo yekupfeka mamiriro, uye inoitwa nekumisikidza pamusoro peyakajairika yakaderera kabhoni simbi kana yakaderera alloy simbi ine kuomarara kwakanaka uye kupurasitiki uye kusanganisa neyakavhara-inodzivirira dura. yehumwe hukobvu nehupamhi hwekuoma uye yakanaka yekupfeka kuramba.
Corten simbi yemaruva hombe yesimbi inorima ekunze inogadzirwa necorten simbi, iyo inogona kushandiswa kudyara marudzi akasiyana emaruva. Corten Steel Planter yakagadzirirwa mune yakapusa asi inoshanda, inozivikanwa muAustralia nenyika dzeEurope. Kunze kwezvo, yayo yakanaka ngura kuramba inogona kumira muyedzo wenguva, vanhu havafanirwe kunetseka nezve yekuchenesa zvinhu uye nehupenyu hwayo.
Tinogona kuita chero dhizaini nyowani seyako yakanaka zano kana mifananidzo, ipa CAD kudhirowa yemahara.
Kune iri simbi art rusvingo, kazhinji isu tinoshandisa iyo hombe yakawanda ngura yekumira simbi sechinhu chisina kugadzirwa, zvichibva pane iyo pateni iyo mutengi yaanoda, tichazviita ne lacer yakatemwa, tobva tawelda uye kuchera, toigadzirisa neyakagadzirirwa Hardware.